Izindaba - umgubho weminyaka engu-10
Inkampani ethandekayo bonke abasebenzi nezivakashi ezihloniphekile:
Sanibonani nonke ntambama!
Ngemuva kweminyaka eyishumi yokulola nokukhula, i-Yuda ishintsha ukushisa isuka edolobheni laseWuxi iye emhlabeni.
Uma sibheka emuva ekukhuleni kweminyaka eyishumi, imiphumela okunzima ukuyithola, abaphathi benkampani nabasebenzi basebenza ndawonye, ​​basebenze kanzima. Kusukela ekuqaleni kokuthuthuka kwabantu abangaphezu kweshumi nambili manje abantu abangaphezu kwekhulu esikalini sebhizinisi, elihlanganisa yonke inhliziyo yakho nokujuluka kwakho, ukuziqhenya ngakho konke ukukhanyiswa. Ngithanda ukubonga bonke abaninimasheya benkampani! Ngiyabonga amashumi eminyaka ukuxhasa nokunakekela abangane bakaYuDa!
Unyaka wezi-2017 ukufeza ukuhlelwa kukazwelonke “okuyishumi nantathu nanhlanu” unyaka obalulekile, ohlangothini lokuphakelwa kwezinguquko zesakhiwo sonyaka wokujula. Eminyakeni eyishumi edlule, sikuqonde ukuhlelwa kwezwe lonke, ngentuthuko enkulu. Eminyakeni emihlanu ezayo, iminyaka eyishumi, sizohambisana nenqubomgomo kazwelonke kanye nomkhombandlela wokuthuthukiswa komnotho, ngokuqhubekayo siya phambili. Kepha futhi nezinguquko nentuthuko yenkampani, ukuphathwa, ukuphepha nokuzinza, insizakalo esezingeni ibeka phambili izidingo ezintsha neziphakeme. Kufanele sisiqonde ngokunembile isimo, sithuthukise ukwazi konke, umuzwa wokuba nomthwalo wemfanelo nomuzwa wokuphuthuma. Ngaphandle kokuphishekela ubuhle. Ukubamba imini nobusuku, umoya wokusebenza ngokuzikhandla, ubambe ithuba lokuhlangabezana nezinselelo zokufeza inkampani entsha yeminyaka emihlanu, uhlelo lweminyaka eyishumi, ezingeni elisha.
Uma sibheke phambili onyakeni omusha, sizoqhubeka nokuthembela ezinzuzweni zamathalente nezobuchwepheshe, sinamathele ezimakethe ezigxile emakethe, kubiza izindleko njengomsuka, ukusungula izinto njengamandla amakhulu, inhliziyo eyodwa nomqondo munye, futhi sisebenzisane ukuze bonke abasebenzi benze okukhulu izinzuzo zenkampani ukudala ukusebenza kahle okukhulu nomzamo.
Ngesikhathi sonyaka omusha, nginifisela nonke: impilo enhle! Umndeni ojabulayo! Ukusebenza kahle! Ngikufisela okuhle!
Isikhathi Iposi: Jan-19-2017